Covid-19 – Page6– Shwe Sar
ကိုဗစ် တတိယလှိုင်း လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ် (လက်ထဲ ငွေသားတွေ ကိုင်ထားကြပါ)
By Shwe SarPosted on October 28, 2020
အမေရိကန် နဲ့ ဥရောပမှာ တတိယလှိုင်း စနေပါပြီတဲ့။ အောက်တိုဘာလက နေစလို့ ကူးစက်မှုနှုန်းတွေ ပြန်တက်နေပါပြီ။ အဓိက အကြောင်းကတော့ ခရစ်စမတ်နီး လာတဲ့အခါ ရာသီဥတု အေးတာကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်က နယ်စွန်နယ်ဖျား အထိပါ ရောက်ကုန်ပြီတဲ့။ မြန်မာပြည် […]
ကိုဗစ် စင်တာ က မေတ္တာ ဇာတ်လမ်းများ (လူနာကို လူနာက ပြန်ပြုစုတာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ တနိုင်ငံထဲ ရှိပါတယ်)
Q ဝင်ပြီး တပတ်ကျော် ပြန်ခါနီ3း4 ရက်အလိုကနဲ့တူတယ်။ ရွှေသံလွင် ဘိုးဘွားရိပ်သာ က အဖိုးတွေအဖွားတွေ covid p+ ဖြစ်လို့တဲ့ Happy covid centerကို ရောက် လာ မ […]
သရုပ်ဆောင် ထွန်းကိုကို Covid ကူးစက် ခံရ
နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌဦးကျော်သူ Covid ကူးစက်ခံရပြီး ကုသမှုခံယူရာတွင် အနီးကပ်ပြုစုရန်အတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့‌သောသရုပ် ဆောင်ထွန်းကိုကိုလည်း Covid ကူးစက် ခံေ န ရပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သရုပ်ဆောင်ထွန်းကိုကိုက “သံမဏိလူသားလဲမဟုတ်ဘူး စက်ရုပ်လူသားလဲမဟုတ်ဘူး ပါဝါရိန်းဂျားလဲ မဟုတ်ဘူး P […]
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး မှာ ကိုဗစ်ကူးစက် ခံရတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၂၀၀ နီးပါး ရှိ သွားပါပြီ (ဒေါက်တာနန္ဒဝင်း)
By Shwe SarPosted on October 26, 2020
“ရန်ကုန်ကို ရောက်ခဲ့တယ်” ၁၀၊၁၀၊၂၀၂၀ အရေးပေါ်ချက်ချင်းပဲ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပြောင်းဖို့ အမိန့် ထွက်လာတယ် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ စနစ်ကျနတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ကြားမှာ တတ်စွမ်းသမျှ လိုအပ်ချက်ရှိနိုင်တာလေးတွေ ကို ကြည့်ကာ ဖြည့်စည်းပေါင်းစပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အလုပ်ေ တွများ […]
ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် လူနာကို လူနာစောင့်ခွင့် လိုက်ပါ နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်း ချက်များ (ရှယ်ထားပေးပါအုံး ..)
ကျွန်တော်ကို ကိုဗစ် Positive လူနာစောင့်လိုက်ချင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လာမေးကြတာတွေရှိပါတယ်။ အရင်ကတော့ လိုက်လို့မရဘူးလို့ပဲ သိထားပင်မဲ့ အခု ကိုဗစ် နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြေ ကားေ ပးနေတဲ့ HICA ဆိုတဲ့အဖွဲ့က တင်ထားတာလေးတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ “ကိုဗစ် positive […]
ကိုဗစ်ပိုး ကို ထုံးပက်ပြီး သုတ်သင်မယ့် မြန်မာပြည်သားများ (ဘယ်သူက မြှောက်ပေး လိုက်လဲ မသိဘူး)
မန်းလေးမှာ ဘယ်သူက စလိုက်လဲ မသိဘူး .. နှင်းတွေများကျနေလား အောင်းမေ့ ရလောက်အောင် ထုံးတွေကို လမ်းတွေမှာ ဖြူးကြတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုဗစ်ပိုး သေအောင်တဲ့။ ကိုဗစ် ပိုး သေတာ မသေတာ အပထား […]
အနံ့ပျောက်တာ နဲ့ ကိုဗစ် ဖြစ်ပြီလား? အနံ့ပြန် ရတာက ကိုဗစ် ပျောက်သွား တာလား? (ရှယ်ထားပေးပါအုံး ….)
ကိုဗစ်ကြော င့် အနံ့ပျောက်ခြင်းသည် နှာခေါင်းပိတ် ခြင်းကြောင့် အနံ့မရှူနိုင်ခြင်း မဟုတ်ပါ၊ အနံ့ခံသော အာရုံခံစနစ်၏ ပြသနာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်တွင် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း နှာဆေြး ခင်းသည် အဖြစ်နည်းပါသည်။ ကိုဗစ်ကြောင့် အနံ့မရပါက လုံးဝအနံ့မရခြင်းဖြစ်နိုင်သလို အနံ့ခပ်ပျော့ပျော့များကိုသာ […]
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ တစ်နာရီ ၈၀၀၀ ပဲယူတယ် ဆို တဲ့ မော်ဒယ်မလေး
By Shwe SarPosted on October 25, 2020
တစ်နာရီ ၈၀၀၀ ပဲ ယူတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်မလေး လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေပန်းစားနေလူမှုကွန်ရက်မှာ လက်ရှိနာမည်ကြီးနေပြီး ပေါက်နေတာကတော့ ပုရိသတွေကြားမှာကြည်နူးနှစ်သိမ့်စေတဲ့ ဆွဲေ င်မှုတမျိုးနဲ့ အပျံစား ဆက်ဆီကျကျ မော်ဒယ်လေး ဖူးဖူးပြည့်စုံ (Phoo Phoo Pyae Sone) […]